Fisokafan'ireo orinasa tsy miankina :: Mitaky fampitomboana ny ora fiasana ireo vondron’ny mpandraharaha • AoRaha
Fisokafan’ireo orinasa tsy miankina Mitaky fampitomboana ny ora fiasana ireo vondron’ny mpandraharaha
Afa-po amin’ny antsasany fotsiny ihany ireo vondrona mpandraharaha taorian’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny fitondram-panjakana amin’ny fanokafana an’ireo orinasa tsy miankina eto amin’ny faritra Analamanga. Tsy ampy azy ireo ny fotoana hiasana, izay mbola noferana hatramin’ny 1 ora tolakandro noho ny fanajana an’ireo fepetra fihibohana.
« Betsaka ireo orinasa misedra olana ka tokony hampitomboana araka ny tokony ho izy ny ora fiasana. Isan’izany, ohatra, ireo orinasa manodina milina 24 ora amin’ny 24 ora. Misy amin’ireny milina ireny no tsy afaka atsahatra ao anatin’ny ora vitsy ka miteraka fahasahiranana », hoy Rajaona Thierry, filohan’ny vondron’ny mpandraharaha mpitantana orinasa tsy miankina eto Madagasikara (GEM) tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Io fanokafana ny orinasa hatramin’ny hariva io no fepetra nandrasan’ny GEM tamin’ ny lahatenin’ny praiminisitra, Ntsay Christian, afak’omaly alina, rehefa nandefa taratasy fangatahana ny famerenana amin’ny laoniny ny asa amandraharaha eny anivon’ny tsy miankina ry zareo, tamin’ny herinandro lasa iny.
Mbola toy ny akoho kely notsipazam-potsimbary ihany koa ireo mpisehatra amin’ny tsy miankina manoloana ny vesatra holanjain’ny orinasa momba ny fandaniana ara-bola takin’ny fepetra napetraky ny fanjakana amin’izao fiverenana amin’ny asa izao. « Isan’izany ny fitaterana. Eo ihany koa ny fividianana ireo fampitaovana ara-pahasalamana izay tsy maintsy hajaina. Mangataka famatsiam-bola manokana izahay, satria mbola vao manarina ny fatiantoka teo aloha », araka ny tenindRajaona Thierry hatrany.
An-danin’izay dia naverimberin’ny minisitry ny Indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa fa tsy maintsy manaja an’ireo fepetra ara-pahasalamana ny orinasa tsy miankina rehetra izay miverina misokatra. « Ankoatra ny fiahiana ny fahasalamana dia mila tandrovana tanteraka ny zon’ireo mpiasa. Betsaka ireo mitaraina noho ny fandehanana an-tongotra mandeha mamonjy ny toera-piasany. Tsy maintsy mijery vahaolana amin’izany ireo mpampiasa », hoy izy, omaly.
Hanara-maso ny fanajana an’ireo fepetra ireo ny fanjakana.
Fanadinana sy fepetra ara-pahasalamana :: Tazonina ho roa isaky ny dabilio ny isan’ireo mpiadina Bakalôrea
Fanovana governemanta :: Tsy mbola afa-bela ireo minisitra tsy mahomby